I-WOWOW Brushed Gold Pot Pot Filler Ikhishi Lompompi Wasedongeni Phezulu Kwesitofu
Ikhaya / Ikhishi Faucets / Embizeni Filler Ikhishi ompompi / I-WOWOW Brushed Gold Pot Pot Filler Ikhishi Lompompi Wodonga Ngaphezulu Kwesitofu
【Nakekela Impilo YakhoMaterial Izinto zethusi eziqinile, okungewona ukugqwala, ukungagugi. Izinga lamanzi liqinisekiswa ngamasu ayingqayizivele okuvimbela ukuhola nokukala, okulusizo empilweni enempilo. ISAZISO: le ompompi yokugcwalisa imbiza yenzelwe ukusetshenziswa kwamanzi abandayo kuphela.
【Ukwenza lula impilo yakho】 I-Single Hole Wall Mount Faucet ku-Double-joint and swing arm design ingahlehlisa uma ingasebenzisi. Yonga isikhala sasekhishini futhi yenza ukupheka kusheshe kakhudlwana, kuhlanzeke.
【Musa Ukusika AmakhonaFinish Isiphetho se-Brush Gold esinezendlalelo eziningi simelana nokuklwebheka nokugqwala, akulula ukusifaka noma ukufiphala. Ifakwe esikhiphekayo esindisa amanzi i-NEOPERL aerator, enikezela ukugeleza kokugeleza kwamanzi okungaguquguquki. I-aerator enengcindezi ephezulu, engashisi kangako futhi engaconsi.
【Izinto ze-Premium】 Sinikeza ngesixhumi esenziwe ngethusi esingakusiza isikhathi eside, akulula ukusiphula (1/2 ”NPS to 1/2” NPT). Ukufaka imbobo yodonga olulodwa, ukufakwa kwe-flange ukuze kuzinze. kufakwe ne-spool sokushintshwa.
【Iwaranti, ukusekelwa kwamakhasimendePacka Iphakheji Kahle ngebhokisi nesiponji esijiyile. OOMOFOFU basekhishini bahlanganiswa iwaranti eneminyaka elinganiselwe engu-5, ukubuyiselwa okunqunyelwe kwezinsuku ezingama-90, nokuxhaswa kwamakhasimende ngesikhathi esifanele.
Isitayela: Isitayela A 200G-Brushed Gold
I-WOWOW Pot Filler Faucet Brushed Gold
OOMPOMPU bokugcwalisa izimbiza zeWOWOW kwenziwa kusetshenziswa ithusi eliqinile le-premium.
Qinisekisa ukuthi amanzi adlula kokugcwaliswa kwamabhodwe angokwemvelo, ahlanzekile futhi anempilo emindenini yakho, Izinga lokugeleza okuphezulu likunikeza ugcwalise izimbiza noma amapani ngokushesha okukhulu.
Ukusebenza okuphezulu kwe-Neoperl Aerator
I-neatorl aerator eyakhelwe ngaphakathi, inikeza isipiliyoni sokuwasha ngokunethezeka, imibhobho yenjoloba ehlanzekile evimbela ukwakhiwa kwamanzi kanzima
Izinga lokugeleza kwamanzi okuphezulu
Gcwalisa izimbiza ezinkulu noma amapani ngokushesha okukhulu.
I-SKU: 2311200G Isigaba: Embizeni Filler Ikhishi ompompi
I-WOWOW I-Brushed Gold Pot Filler Wall Mount Foldin...
WOWOW Embizeni lokugcwalisa isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Brass Wall Moun ...